Harka uffannaa uffatee jiru keessaan haayilaandii bishaanii akka 'zuurbaa' jimaatti baata. Haayilaandii kana ammoo, akka simbira midhaan funaannattuu nafa nafa gadi itti jedhee akka daa'ima xuuxxoo hootuutti hodhee ol jechuun ija namaa ilaallatee itti deebi'a. Wayitaa haayilaandii kanarraa ol jedhu garuu akka raata'uu, akka of wallaaluu wayii ta'a. Namummaan sila haasaa qajeelchee dubbatu akka akka waan elektirikiin qabee loqodaa'a. Garuu of beeka ni dudubbata, 'Chaayinaan'.
'Chaayinaan' maqaa hiriyoonnisaa ittiin waamaniidha malee maqaan warrisaa moggaasaniif Naahom Abbuyyeeti. Daa'ima waggaa 10 hincaalle daandiirra jiraatuudha. Araada maastishiitiin (Amaaguu) kan qabamee jirudha. Daa'imman tibbana namni dhuunfaa tokko daandiirraa walitti qabee isaan deggaruuf tattaffii taasisaa jiru keessaa Chaayinaan isa tokko. Araada maastishii cimaadhaan qabamee kan jirudha.
Maastishiidhaaf obsa hinqabu. Isa dhabnaan jireenya waan qabu itti hinfakkaatu. Gaaffii, walfakkaataa wanti guyyaatti hedduu isaan rakkisu maal akka ta'e oggaa gaafatamanitti, hiriyoonni isaa nyaata, uffannaa, gargaarsaa dhabuufi kkf eeran. Chaayinaan garuu maastishii jedhee deebise. Deggarsaa argannaan araada kanarraa adda ba'uudhaafis ofiisaaf waadaa kan seene.
Chaayinaan barumsa fedha. Araada kanaan qabamuu kan danda'es hiriyootasaarraa argeeti. Innis miidhaa abbaansaa obboleettisaarraan ga'e wayita yaadatu, konkolaataa jala seenuu waan hawwisiisuuf sana dagachuuf akka gargaaramudha, kan nuuf ibse. Araada kan jalqabe fedhee utuu hintaanee dirqamee akka ta'eedha, kan irraa calqqisu. Miidhaa maastishiin qabu kan hanga tokko hubatu ta'us, utuu beekuu kan itti gargaaramudha.
Kan boodas araada kanarraa fagaachuudhaaf kan waadaa galeefi namoonni biroonis akka araada kanaan hinqabamne gorsa. "Hundinuu araada keessaa ba'ee namoota maastishii gargaaraman harkaa guuruun nama gubuu danda'u nu haa taasisu" jedha daa'imni kun.
“Amaaguun” maqaa maastishii kan itti fayyadamtoonni (araada sanaan kanneen qabamanii daandiirra jiraatan) dhoksaadhaan waliigaluun moggaafatanidha. Maastishii jedhanii kallattiidhaan yoo waaman, poolisootaan qabamuu waan danda'aniif, miliquuf jecha “Amaaguu” jedhanii akka waaman kan eeru ammo akkuma Chaayinaa, daa'ima daandii gubbaa jiraatu Tolasaa Abbocheeti.
Innis araada kana dhiisee kan tureefi hiriyootasaarraa arguun kan itti deebi'eedha. Amaaguun faayidaansaa gaarii isaanitti haa fakkaatu malee miidhaasaa namootarratti akka arganiidha kan dubbatu. Hiriyoonnisaanii baay'een dhukkubba kaleetiin qabamanii hospitaala ciisu. Kaanis isaan biratti du'anii akka buluusaanii dhiyeenyatti kan beeku ta'uu ibsa.
Tolasaan akka jedhutti Amaaguun kan isaan gargaaru, yoo beela'an beelaa kan obsisiisu, yoo isaanitti dhaamote dhaamochaa irra kan balleessu ta'uu hima. Amma garuu eenyummaa duraaniitti akka hindeebineefi barumsasaa sirnaan barachuuf akka tattaafatuudha, kan eeru.
Daa'immaan ja'a kanneen araada garagaraatiin qabamanii jiran keessumaa araada maastishiitiin qabamanii jiran kana walitti qabuudhaan deggarsaa isaan barbaachisu taasisuudhaaf hojjetaa kan jiran dhalataa Itoophiyaa biyya Kanaadaa jiraatu Doktar Gazzaanyi Hordofaati. Daa'imman kanneen waliin walarguu kan danda'an naannawaa hoteela buufatasaaniitti wayitasaan nyaata isaan gaafatanitti ture. Jireenyi daa'immaan hedduu daandiirratti babbadaa jiraachuu kan taajjaban Finfinnee keessatti, namoonni akka daa'imman daandiirrattii hinbaane gochuufi erga ba'aniis deggarsaa garagaraa taasisuudhaan jireenya daandiirraa keessaa baasuu akka qaban hubachiisu.
Doktar Gazzaanyi, dhalatanii kan guddatan Godina Addaa Naannawaa Finfinnee magaalaa Dukamitti yoo ta'u, barumsasaanii kophee bara baasoo jedhamuun baratanii xumuruun sadarkaa amma jiranirra kan ga'aniidha. Isaanis daa'immaan kanneeniif afeerraa laaqanaa, daara baasuudhaan kan eegalan ta'us, hangasaan sadarkaa tokkorra ga'anitti cinasaanii gorani kan hojjetan ta'uu himu. Kanaaf, barumsaan, fayyaasaanii eeguudhaan, kanneen hoji fedhan ammoo hojirraatti akka bobba'an gochuudhaaf dhaabbilee barnootaa, amantiifi kanneen hojii tola oltummaarratti hojjetan walta'uun kan deggaran ta'uu himu.
Yeroo baay'ee naannawaa magaalaatti daa'imman kan heddummaattan yoo ta'u, isaanis abbaafi haadhasaaniirra ba'anii daandiirratti wayita ba'an maallaqa kennuurra jireenya waaraa akka jiraatan taasisuuf deggarsa gochuufiin barbaachisaadha jedhu.
Yeroo hundaa konkolaataa konkolaachisaa daabboo hiixachuufiin hiika hinqabaatu jedhanii, hundinuu daa'imman daandiiraa kaasuudhaan lammii ga'oome uumuu akka qabu dhaaman.
Walumaagalatti, daa'imman hedduun araada gargaraatiin daandiirratti harca'aa jiru. Kana malees sababa hiyyummaatiin yookaan miidhaa isaanirra ga'e dagachuuf kan daandiitti ba'anillee, cinasaanii dhaabbatanii jajjabeessuun barbaachisaafi murteessaadha.
Torban kana/This_Week 9625
Guyyaa mara/All_Days 1819045